नेपालमा यतीको पाइलाः भारतीय सेनाको दाबीमाथि सामाजिक सञ्जालमा ठट्टा
Wednesday, 25 November, 2020 | १0 मङ्गसिर २0७७ , बुधबार
भारतीय सेनाले नेपालको मकालु हिमालको आधार शिविरमा यतीको पैतालोको छाप भेटेको दाबी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा ठट्टाको विषय बनेको छ। सोमवार सेनाले ६० लाख फलोअर्स भएको ट्विटरबाट आफ्नो आरोहण दलले ‘मकालुको आधार शिविरमा’मिथक कथामा वर्णित यतीको रहस्यमय पैतालो छाप भेटेको जानकारी दिएको छ।
ठूलो बाँदरजस्तो जनावरका रूपमा वर्णित यति दक्षिण एशियाका लोककथाहरूमा भेटिन्छ। हालसम्म यतीको अस्तित्वको बारेमा कुनै प्रमाण नभए पनि दक्षिण एशियामा यसलाई विश्वास गर्नेहरू छन्। र, भारतीय सेनाले आफ्नो आधिकारिक ट्विटरमा यतीको ुपैतालोको छापको तस्बिर प्रकाशन गरेर त्यो कथामा नयाँ कोण थपेको छ। त्यो तस्बिर एप्रिल ९ मा खिचिएको भए पनि भारतीय सेनाले यतिका बारेमा प्रचलित सिद्धान्तहरूसँग मेल खाएको निश्चित गरेपछि मात्रै प्रकाशित गरेको टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकाले लेखेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा उत्पन्न शङ्कालाई लक्षित गर्दै भारतीय सेनाले यतीका अस्तित्वका बारेमा प्रमाणको तस्बिर खिचिएको र सम्बन्धित विज्ञहरूलाई हस्तान्तरण गरेको बताएको छ । त्यसैले हामीले सोच्यौँ कि वैज्ञानिक सोचलाई आकर्षण गर्न र रुचिलाई पुनर्ताजगी गर्न यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
यती हिमालयको माथिल्लो भागमा बस्ने मानिन्छ र यति वा यसका पैतालोका छाप देखेको कथाहरू नेपाल, भारत र भुटानमा प्रचलित छ।
सन् २०१३ मा ब्रिटिश वैज्ञानिकहरूको टोलीले यती हिमालमा पाइने भालुको एक उपप्रजाति हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। ट्विटरमा मानिसहरूले भारतीय सेनाको दाबीलाई विश्वास नलागेको बताएका छन्। भारतीय सेनाको दाबीमाथि ठट्टा गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। हालैका वर्षमा यतीको अस्तित्वका बारेमा थुप्रै अनुसन्धानहरू भएका छन्।
सन् २०११ मा ५० वर्षअघि नेपालबाट लन्डन पुरर्‍याइएको एउटा यतीको औँला मानिसको हाड भएको प्रमाणित भएको थियो।
नेपालमा पत्रकार कनकमणि दीक्षितले यतीको पाइला बनाउने तरिका भन्दै ट्विटरमा भारतीय सेनाको दाबीलाई प्रश्न गरेका छन्। बीबीसी नेपाली सेवा अनलाईन
प्रकाशित १७ बैशाख २0७६ , मङ्गलबार | 2019-04-30 10:58:09
एजेन्सी । दुनियाँमा को सबैभन्दा खुसी छन् ? यसको यकीन जवाफ छैन् । तर,पछिल्लो एक नयाँ अध्ययनले अविवाहित महिलाहरु सबैभन्दा खुसी रहेको तथ्य
अपांग कछुवालाई व्हील चेयर !
लुसियान/लुसियान स्टेट युनिभर्सिटीका भेटनरी डाक्टरहरूले अपांग कछुवाका लागि व्हील चेयर तयार पारेका छन् । यसबाट कछुवाले नयाँ जीवन पाएको
उमेर पुगेका युवतीहरुको विवाह नहुँदा अभिभावक चिन्तित हुने गर्छन् । त्यो स्वभाविक पनि हो । ‘लगन जुरे’पछि विहे भइहाल्छ भन्ने प्रचलन
भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिमण्डलमा साइकलवाला मन्त्री बनेका छन् । भारतीय जनता पार्टीबाट टिकट पाएर लोकसभा निर्वाचनमा
कसरी यू ट्युब भिडियो बनाउने ? यी १०
१० वर्षे बालिका जो यतिबेला यू ट्युबमा निकै चर्चामा छिन् । कतिपयले उनले निर्माण गरेका भिडियो हेर्नु भएको पनि होला । उनी हुन् भारतीय
कुकुरले गर्‍यो जिउँदै गाडिएको बच्चाको
उत्तर थाईल्यान्डमा जिउँदै गाडिएको एउटा नवजात शिशुलाई एउटा कुकुरले उद्धार गरेको छ । पन्ध्र वर्षीया एक स्थानीय किशोरीले बच्चा जन्माएर